မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: August 2008
အင်မတိ အင်မတန် အလုပ်များနေ၍ ခေတ္တပို့စ်မတင်နိုင်သေးပါရှင် ခေတ္တစောင့်ဆိုင်းပြီးမှ ပြန်လာလည်ပါရှင် ကျေးဇူးတင်ပါသည်ရှင်... ပဲသီးဘူးသီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
နည်းပညာပိုင်းမို့ တကယ်အဲလိုဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်မသိပေမဲ့အဲလို ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေထိ မလွတ်မလပ်ထိပါးခံရတာမျိုး မနှစ်သက်လို့ ဒီမေးလ်လေးကို forward လုပ်လိုက်တာပါ။---------- Forwarded message ---------- မြန်မာ Chatter များအတွက် အထူးသတိပေးချက်Myanmar Online ဟုတ်ခေါ်သော Network တစ်ခုမှ ပြုလုပ်ထားသော #ygnchat ဆိုသည့် Chatting Server တစ်ခုသည် spy module ကို အသုံးပြုပြီး .. Chatter များ၏ Private log များကို ခိုးယူကြည့်ရှု့နေပါသည်။ ထို Chat မှ Admin Oper Op များသည် Chatter များ Private ကိုခိုးကြည့်က မိန်းခလေးများ၏ ဖုန်းနံပါတ်များကို မှတ်သားပြီး ဖုန်းဆက်ခြင်း ၊ Email များကို ခိုးယူ၍ Email များအတင်းပို့ခြင်း ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စများကို ကြည့်ရှု့၍ အတင်းပြောရည်မောခြင်းများပြုလု ပ်နေပါသည်။ ထို့အပြင် Nick register လုပ်ထားသော Password များကို ကြည့်၍ Chatter များ၏ Email များကိုဝင် ရောက်က ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စများကို ခိုးယူကြည့်ရှု့ကြသဖြင့် Nick register Password နှင့် Email Password များကို အတူတူမဖြစ်စေရန် အထူးသတိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ သူတို့အသုံးပြုထားသော IRC Module မျာကို ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီ Command လေးကို #ygnchat server တွင်ရိုက်ကြည့်ပါက မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ /module ဆိုသော Command ကိုရိုက်ကြည့်ပါက အောက်တွင်ပြထားသော စာများပေါ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုပေါ်လာသော စာသားများသည် သူတို့အသုံးပြုထားသော module များဖြစ်ပါသည်။ irc.myanmaronline.net.mm ** spy (real-time spying) [3RD] ဆိုသော module ကိုထိပ်ဆုံးတွင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို module သည် Chatter များ၏ Privacy ကိုတန်ဖိုးထားသော မည်သည့် IRC မှအသုံးပြုခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်း ကွန်ပြူတာတွင် သူတို့တော်သည်တက်သည်ဆိုတိုင်း အခုလို့ အင်တာနက်ကို အသုံးပြုပြီး အလွဲသုံးစားပြုလုပ် နေသော Myanmar Online #ygnchat Server တွင် အတက်နိုင်ဆုံး Chatting မပြုလုပ်ပဲနေကြပါရန် အထူးသတိပေးအပ်ပါသည်။ ဤသတင်းအား သင်၏သူငယ်ချင်းများကို Forward လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ထိုသူတို့၏ မတရားပြုလုပ်မှု့များကို တားဆီးကြပါရန် .....။-irc.myanmaronline.net.mm- ** spy (real-time spying) [3RD]--irc.myanmaronline.net.mm- ** operjoin (Join & sajoin override) [3RD] --irc.myanmaronline.net.mm- ** staff (command /staff) [3RD]--irc.myanmaronline.net.mm- ** ircops (command /ircops) [3RD]--irc.myanmaronline.net.mm- ** m_antidccbug (Anti mIRC dcc exploit) [3RD] --irc.myanmaronline.net.mm- ** getinfo (command /getinfo) [3RD]--irc.myanmaronline.net.mm- ** clones (command /clones) [3RD]--irc.myanmaronline.net.mm- ** m_chgswhois (commands /chgswhois & /setswhois) [3RD] --irc.myanmaronline.net.mm- ** cloak (Official cloaking module (md5))--irc.myanmaronline.net.mm- ** commands (Wrapper library for m_ commands)--irc.myanmaronline.net.mm- ** operpasswd (Failed OPER attempts notifier) [3RD] --irc.myanmaronline.net.mm- ** textban (ExtBan ~T (textban) by Syzop) [3RD]ကျေးဇူးတင်ပါသည်မြန်မာလူမျိုးကိုချစ်သော မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက် Gepostet von
ဒီရက်ပိုင်း စပ်မိစပ်ရာဖတ်မိသော ဘလော့ဂ်လင့်ခ်တွေပါနားခိုရာ => http://narkhoyar.blogspot.com/ဖြူအောင်စိတ်ကိုထား => http://brain-and-beauty.blogspot.com/knowledge for Burmans => http://www.educate-myanmar.com/Nutty professor? => http://education.zdnet.com/?p=1793Roast the baddies, report phishers or social engineers!!! => http://www.us-cert.gov/nav/report_phishing.htmlLSE External Study => http://www.lse.ac.uk/collections/LSEExternalStudy/Professional Graduate Diploma in IT => http://www.bcs.org/server.php?show=conWebDoc.12022(This level is the academic equivalent to Year3ofaUK university honours degree.)့Henley DL MBA => http://www.henleymc.ac.uk/henleymc03.nsf/pages/mba_modes_dlmbaFT list => http://www.ft.com/cms/e677c5bc-b5b5-11da-9cbb-0000779e2340.pdThe Economists Magazine EIU's which MBA list for DL MBA =>http://mba.eiu.com/index.asp?layout=view_article&eiu_article_id...Singapore NUS DL =>http://www.rmi.nus.edu.sg/mscdislearning/intro.htmlNTU non degree cert programs =>http://www3.ntu.edu.sg/cce/Distance_Learning/default.htmOnline MBA from Univ of North Alabama => http://distance.una.edu/DL MBA, WBS, Warwick Univ,, UK => http://www.wbs.ac.uk/students/mba/learn/dl.cfmOnline MBA, Institute of Economics, Yangon => http://www.elearning.edu.mm/CFA => www.cfainstitute.org/PMP => http://www.pmi.orgGood univ. guide UK 2009 => http://extras.timesonline.co.uk/tol_gug/gooduniversityguide.phpPhD comics => http://www.phdcomics.com/comics.phpမြန်မာ အိုင်တီ ပရိုဖက်ရှင်နယ် ဖိုရမ်ရဲ့သရက် တစ်ခုထဲက အဲဒီလင့်ခ်တွေတွေ့မိတာပါ။
မယ်လိုဒီအကြွားထူပါသည်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲသိပါသည်။သို့သော် ကြွားချင်ပါသည်။ကြွားချင်လွန်းလို့ ကြွားပါရစေ ခွင့်တောင်းပြီး စကြွားပါပြီ။ရွှေမေတ္တာတော် ပို့လိုက ပို့ သို့မဟုတ် ဤပို့စ်ကို ကျော်ဖတ်ပါဗျိုးးးးးးး :Pစင်ကာပူကိုရောက်နေတာ တစ်လပြည့်ပါတော့မည်။ရောက်ကတည်းက KFC နှင့် Mac Donald, Burger King တို့တွင် အလှည့်ကျစားပါသည်။ ရံဖန်ရံခါ Hawker Centres များတွင် စင်ကာပူအစားအသောက်များကို စား၍သော်လည်းကောင်း StarBucks တွင် ကော်ဖီသောက်ခြင်းကိုလည်းကောင်း အစီအစဉ်အတိုင်း အလျဉ်းသင့်သလို ထည့်သွင်းထားပါသည်။မြန်မာဟင်းနှင့် မြန်မာစားစရာမျိုးစုံကိုလည်း ပင်နင်စူလာ B1 မှ ဆိုင်အသစ်များတွင် လည်းကောင်း သံလွင်အိမ်၌ သွား၍သော်လည်းကောင်း တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးမရိုးအောင် စားပါသည်။ အားနေလျှင်ပျင်းနေလျှင် Toapayoh Central နှင့် Bugis ရှိ OG တွင်လည်းကောင်း Junction 8 တွင်လည်းကောင်း shopping ထွက်ပါသည်။ Orchard တွင်တော့ အလုပ်မရသေး၍ ပိုက်ပိုက်ခြွေတာနေရသေးသောကြောင့် window shopping သာလုပ်ရပါသေးသည်။ ၀ယ်ဖြစ်သော ပစ္စည်းများမှာ စာရင်းမလုပ်နိုင်သေးသောကြောင့် မရေးတော့ပါ။AngMoKio ရှိ ရုပ်ရှင်ရုံတွင်လည်း RED CLIFF ကို ကြည့်ရှုခံစားပြီးကာ Esplande ကိုလည်းရောက်ပီးပီ။ Handerson Waves ကိုလည်း နှစ်ခေါက်၊ Vivo City နှင့် Orchid Garden၊ တိုပါရိုး ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ Eunos ဘုန်းကြီးကျောင်း လဲရောက်ပီးပီ။ ဆေးရုံတို့ ရဲစခန်းတို့ကိုလည်း ခင်မင်ရင်းနှီးသူတစ်ဦး ကျေးဇူးနှင့် ရောက်သွားပါသေးတယ်။(တစ်ယောက်က သောကြာနံနှင့်စသော ဘလော့ဂါတစ်ဦး နေမကောင်း၍ ဆေးရုံလူနာသွားမေးခြင်း နှင့် နောက်တစ်ဦးက အင်္ဂါနံနှင့်စသော …)နှစ်ထပ်ဘတ်စ်ကို အပေါ်ရောအောက်ပါကြုံသလိုစီးပြီး နေရာအနှံ့ sightseeing လုပ်ခြင်း MRT ကို မြေပေါ်မြေအောက် အကုန်ရောက်အောင်စီးပြီး လျှောက်သွားခြင်းလဲ လုပ်ပီးပီ။မြန်မာကျူးပစ် မင်ဘာများထဲမှ Garfield ကြောင်ဝတုတ် နှင့် တော်သလင်းတို့ကိုလဲ တွေ့ပါသည်။ Garfield မှ KFC လိုက်ကျွေး၍ အားနာပါးနာနှင့်သော်လည်းကောင်း တော်သလင်းမှ Singapore Sling ဖြင့် ဧည့်ခံမှုကို အားနာပါးနာနှင့်သော်လည်းကောင်း)Singapore National Day တွင်လည်း တထိန်းထိန်းနားကွဲ မတတ်သော အသံများနှင့်ပစ်ဖောက်သော မီးရှူးမီးပန်းများကိုလည်း ရင်သပ်ရှုမော သွားကြည့်ပီးပီ။ ဘူဖေးစားနည်းနိဿရည်းကို ဟော့ပေါ့နှင့် အကင်ဆိုင်တွင် လက်တွေ့အသုံးချပြီးခြင်းသည် လည်းကောင်း မယ်လိုဒီ၏ တစ်လတာ ကြွားစရာအကြောင်းအရာများအဖြစ် အမြင်ကတ်ခံရအောင် ရေးသားတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်နော်။ ဒန်..တန့်..ဒန်…လွတ်လပ်စွာ ကဲ့ရဲ့နိုင်သလို ပျော်ရွှင်စွာ မျှဝေခံစားနိုင်ပါသည်။ မယ်လိုဒီအလုပ်ရပီးတဲ့အချိန် သူငယ်ချင်းမောင်နှမတွေ စင်ကာပူကို လာလည်တဲ့အခါ အခု ကြွားသွားတာတွေ အကုန်လုပ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားရင် ကိုယ့်စားရိတ်ကိုယ်ခံ American system နဲ့အဖေါ်လိုက်လုပ်ပေးမယ်နော် တကယ်ပြောတာပါ အဟိဟိ
ဒီနေ့ သူငယ်ချင်းလင်မယားက သူတို့ ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်တဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို လိုက်ပြီး ကုသိုလ်ယူဖို့ ဖိတ်လို့ မနက် ၉နာရီကျော်လောက် အိမ်ကထွက်ပြီး MRT ကို အနီလိုင်းနဲ့ အစိမ်းလိုင်း ကျွမ်းကျင်စွာပြောင်းစီးလို့ ၁၀နာရီမှာ Eunos MRT ကို ရှောရှောရှူရှူရောက်သွားတယ်။ စိတ်ပူပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းကတော့ စထွက်ကတည်းကနေ ဘယ် MRT ရောက်နေပြီလဲကို ဖုန်း ၃ခါလောက် ဆက်မေးတယ်။ Eunos MRT ရောက်တော့ passenger service နားမှာ စောင့်နေတယ် လာခဲ့ဆိုပြီး ပြောတော့ အဆင်သင့်တွေ့ရတယ်။ ငါကွ… ရောက်ရောက်ချင်း အောက်ထပ်မှာ ဘုရားကန်တော့ ၊ ဆွမ်းပွဲအတွက် လိုတာတွေကူလုပ်၊ ဘုန်းဘုန်းတွေ အပြင်ခဏကြွသွားလို့ မုံ့ဟင်းခါး အရင်စား၊ ၃ထပ်က ဓာတ်တော်တိုက်ရှိတယ်၊ သွားဖူး။ အားးးးပါးပါးးးဓာတ်တော်တွေအများကြီးပဲ။ မြန်မာမှာ တွေ့ခဲ့ဖူးတာတွေထက် ပိုစုံတယ်။ မိုးကုတ်မှာတုန်းက ဖောင်တော်ဦးဘုရားမှာ မိုးကုတ်ဆရာတော် ဦးဝိမလရဲ့ ဓာတ်တော် မျက်လုံးတော်ကို ဖူးဘူးတယ်။ ရန်ကုန်၊ မန်းလေးတွေမှာ စွယ်တော်၊ မြတ်စွာဘုရား သွားတော် အံတော် နဲ့ ရဟန္တာတွေ၊ ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ ဆံတော်၊ အရိုးတော်၊ ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုလဲ အများအပြားစုံလင်အောင် ဖူးဘူးတယ်။ ခု ဒီ Eunos ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာကျ ဘာကို ထူးထူးဆန်းဆန်းသတိထားပြီး ဖူးရလဲဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဦးဏှောက်တော်ကကျတဲ့ ရွှေရောင်ဓာတ်တော်သေးသေးလေးတွေကို တအံ့တသြဖူးခဲ့ရတယ်ဗျ။အဲဒီဓာတ်တော်တွေအတွက် လျှပ်စစ်မီးအလင်းရောင်ပူဇော်ဖို့ တစ်နာရီ $၁၀ နှုံးနဲ့လဲလှူလို့ရတယ်။ နည်းများမဆိုလဲ donation box လေးထဲ ထည့်လှူလဲရတယ်။ ကျမလဲ လှူခဲ့တယ်။ ဘုရားမှာလဲ ဆွမ်းတော်တွေကပ်ကြတယ်။ ပြီးတော့ ဘုန်းဘုန်းတွေပြန်ကြွလာတာနဲ့ အောက်ထပ်ပြန်ဆင်းကြပြီး ဆွမ်းကပ်ကြပါတယ်။ ဘုန်းဘုန်းတွေဆွမ်းဘုန်းနေတုန်း ကျမက ၀ါဆိုဖယောင်းတိုင်ပေါ့နော် ဘုရားမီးပူဇော်ပါတယ်။ မုံ့ဟင်းခါးမစားရသေးသူတွေလဲ မုံ့ဟင်းခါးစားကြတာပေါ့နော်။ အဲဒီမှာ ဗောဓိပင်လဲရှိတယ်။ ဗောဓိပင်ကိုလဲ ရေသွားလောင်းလိုက်သေးတယ်။ လှူလို့ရတာတွေက ၀ါဆိုသင်္ကန်းတစ်စုံကို $၃၀ နှုံးနဲ့ ဒါမှမဟုတ်လဲ ၀တ္ထူငွေကပ်ရင်ကပ်ပေါ့နော်။ နောက် ဒီကျောင်းက အိမ်ကို ငှားထားတာလေ။ အဲဒီတော့ နောက်တနေရာရာမှာ အတည်တကျ မြေ၀ယ်ပြီးကျောင်းဆောက်လုပ်ဖို့ရာအတွက် လှူဒါန်းလို့ရပါတယ်။ တစ်ပေပါတ်လည်ကို $500 နှုံးနဲ့ပါ။ လောလောဆယ်တော့ အလုပ်မရသေးလို့ တစ်ယောက်တည်းလှူနိုင်သေးဘူး။ ရေစက်ဆုံချင်သူ သူငယ်ချင်းများနဲ့ စုပေါင်းစပ်ပေါင်း လှူဖို့ စိတ်ကူးထားလိုက်တယ်။ဘုန်းဘုန်းတွေ(၃ပါး) ဆွမ်းဘုဉ်းပေးပြီးတော့ ကျမတို့ တရားနာ အမျှပေး ရေစက်ချကြပါတယ်။ ဟောတဲ့တရားထဲမှာတော့ အခုလို စုပေါင်းစပ်ပေါင်းလှူတာမှသည် စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းသည် အောင်မြင်ခြင်းသုခ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲ ပါတယ(သမဂ္ဂါနံ သမဂ္ဂသုခံ ဆိုလားမသိဘူး)်။ အရွယ်သုံးပါးမရွေး ဆင်မြန်းရမဲ့တန်ဆာအနေနဲ့ စာရိတ္တသီလ ဆိုတာလဲပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ တင့်တယ်စွာ ဆောင်ယူရမဲ့တန်ဆာက ပညာ၊ လှူဒါန်းပေးကမ်းရက်ရောခြင်း သဒ္ဒါက ကိစ္စပြီးမြောက်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာလဲပါတယ်၊ အိမ်တစ်အိမ်မှာ ရပ်ရွာမှာ တိုင်းပြည်မှာ ဥာဏ်ပညာရှိတဲ့သူ အုပ်ချုပ်မှ တိုးတက်အောင်မြင်တယ် ဆိုတာလဲပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဘာလဲသိဘူး မေ့သွားပီ အဟီးးးအားလုံးက ကြီးပွားချင်လို့ ဒီမှာအလုပ်လာလုပ်ကြတာတဲ့။ ကြီးပွားချင်ရင် ကြီးပွားကြောင်းတရားပဲလုပ်ရမှာပေမဲ့ မလုပ်ကြတဲ့သူတွေလဲရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ နောက် ဆုပေးတာကတော့ မိဘကို အချိန်မီကျေးဇူးဆပ်နိုင်သူတွေဖြစ်ပြီး ဘုရားသာသနာကို ခုလိုလှူဒါန်းစောင့်ရှောက် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သူတွေဖြစ်ကြစေဖို့ ဆုတောင်းလဲဆုတောင်း ပြည့်လဲပြည့်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုပေးပြီး ရေစက်ချ အမျှဝေပါတယ်။ ဘလော့ဂ်မှာ လာဖတ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေလဲ အမျှရကြပါစေ..ရေစက်ချခွက်ထဲက ရေတွေကိုတော့ ဗောဓိညောင်ပင်လေးမှာ သွားလောင်းပြီး ဒီနေ့ပြုသမျှအလှူကို ၀သုန္ဒေ္ဓရေမြေနတ်သမီးကို သက်သေတည်စေပါတယ်။ဒီနေ့အလှူလေးကို ဖိတ်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းလင်မယားကိုလဲ မြန်မာလိုပဲ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှုတ်ကလဲပြောပြီး ဒီပို့စ်လေးကနေလဲ ထပ်မံပြောပါရစေ။ဓာတ်တော်တွေဖူးဖို့ဖြစ်ဖြစ် အလှူဒါန နည်းများမဆိုတတ်အားသရွေ့ထည့်ဝင်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းကို သွားချင်ရင် လိပ်စာက - No. 11 Teo Kim Eng Road(Behind Eunos Mansion) bet: blk 321 & 322 ၊ ဆရာတော်ဘွဲ့နာမည်က Ven. U Thera Vansa ပါ။ Eunos MRT ကနေ bus no. ၉၃ စီးရင် ၃မှတ်တိုင်မြောက်မှာဆင်းပြီး တံတားပေါ်ကကူးပြီး ၅မိနစ်လောက် ဟိုဘက်ကို လမ်းဆက်လျှောက်ရပါတယ်။ တကယ်လို့ ရှာမတွေ့ရင် ဖုန်းနံပါတ် 6748 7352 ကိုဆက်သွယ်လိုက်နော်။စာကြွင်း။ ။ ရန်ကုန်မှာဆို ဒီအချိန်လဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အိမ်မှာ နှစ်တိုင်း ၀ါဆိုသင်္ကန်းသွားကပ်နေကြမို့ သတိရမိပါသေးတယ်။